जोडी रुपा र कृष्ण वलीले दिए खुसीको खबर, यस्तो स्टाटस लेख्दै राखिन् यी तस्विरहरू ! – Online Nepal
June 6, 2020 458
काठमाडौं । रुपा र कृष्ण वलीको जोडी सामाजिक सञ्जा’ लमा निकै भाइरल जोडी हो । उनीहरुको जिवनको संघर्ष मानिसको जिवनका लागि प्रेर’णा दिने खालको छ ।
आफ्नो जिवनमा आएको सबैभन्दा खुसीको क्षण सार्वजनिक गर्दै रुपाले आफुलाई आशि,र्वाद दिन भनेकी छन् । उनी गर्भवती भएको खबर आफ्ना फ्यानहरुलाई बाँडेकी छन् । आफ्नो दुखको समयमा पनि साथ दिएका शुभचिन्तकहरुका लागि खुसीको कुरा भन्दै उनले गर्भवती अवस्थाका तस्बिर सार्वजनिक गरेकी हुन् । ति तस्विरमा हजारौंले बधाई दिएका छन् । उनीहरुको खुसीमा खुसी ब्यक्त गरेका छन् ।
जिवनमा आएको एउटा ठूलो विपत्ती को साम ना गर्न उनीहरुलाई ला खौं मानिसको साथ र समर्थन प्राप्त भयो । सबैको सहयोगका कारण नै यो सम्भव भएको हो । उनले आफ्नो विवाहको तेस्रो वार्षीक उत्सवका अवस रमा यि तस्बिर सार्निवज क गरेकी हुन् ।-ताजाखबरबाट
Prev१८ वर्ष पुगेकालाई अनिवार्य सैनिक तालिम माग गर्दै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता
Nextकोरोनाको औषधि अब नेपालमै हुने भयो, अबदेखि यसरी काम हुँदै दुनियाँ चकित ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
रुपन्देही ह*त्या काण्डका नाईके यहि हाे हेर्नुस्, बेहाे*सकाे भएकाे नाटक। (भिडियो हेर्नुहोस्)
प्रधानमन्त्रीले बोलाए बैठकः गाउँ फर्किनेहरुबारे निर्णय हुदैं